Indlela Yokuthi Cha Enganeni Yakho | Usizo Lomkhaya
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Oromo Isi-Ukraine IsiBemba IsiBengali IsiBhunu IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiGujarati IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLozi IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMalta IsiMyanmar IsiNepali IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwahili (SaseCongo) IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTwi IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
Ingane yakho ifuna izinto ngenkani. Noma nini lapho uthi cha, ukuba luhlaza kwayo kuvivinya ukubekezela kwakho. Okushoyo nokwenzayo akuyenzi izole, ugcina usubona ukuthi ayikho enye indlela kodwa kufanele uyivumele. Ngenxa yokuthi usukhathele ukuthi cha enganeni yakho, uyaphoqeleka ukuba ugcine uvumile.
Ungawunqoba lo mshikashika. Nokho, okokuqala, cabangela izizathu ezikwenza ungavumi.
Ukuthi cha akusona isihluku. Abanye abazali abavumelani nalokhu, bangase bathi kufanele ubonisane nengane yakho, ungeneke, noma nize nibonisane ngisho nokubonisana. Kodwa bathi kugweme ukuthi cha ukuze ingane yakho ingakucasukeli.
Yiqiniso, izwi elithi “cha” lingaqale liyidumaze ingane yakho. Noma kunjalo, liyifundisa isifundo esibalulekile sokuthi ekuphileni, abantu kumelwe balawulwe imingcele ethile. Ngakolunye uhlangothi, ukuba uvuma zonke kulenza libe buthaka igunya lakho njengomzali, futhi kufundisa ingane ukuba ikulawule ngokuvele iklabalase njalo lapho ifuna okuthile. Ngokuhamba kwesikhathi, indlela osabela ngayo ingase iyicasule ingane. Kakade, ingane ingamhlonipha kanjani umzali onguvuma zonke?
Ukuthi cha kwakho kulungiselela ingane yakho isikhathi sobusha nesokuba umuntu omdala. Kuyifundisa izinzuzo zokuzithiba. Ingane ethola leso sifundo esibalulekile, cishe ayoba mancane amathuba okuba ivumele ukucindezela kokuba isebenzise izidakamizwa noma iye ocansini ngaphambi komshado phakathi neminyaka yokukhula.
Ukuthi cha kunikeza ingane nokuqeqeshwa okuyoyisiza lapho isikhulile. UDavid Walsh ongudokotela uyabhala, “Iqiniso liwukuthi, thina [bantu abadala] asikutholi ngaso sonke isikhathi esikufunayo. Asizisizi ngalutho izingane zethu uma sizifundisa ukuthi ngaso sonke isikhathi ziyothola noma yini eziyifunayo kuleli zwe.” *
Gxila emgomweni wakho. Ufuna ukuba ingane yakho ivuthwe, ikwazi ukulawula kahle imizwelo yayo, futhi ibe umuntu omdala okwazi ukuzimela. Kodwa wenza ngokuphambene nalowo mgomo uma uyinika konke ekufunayo. IBhayibheli lithi uma umuntu ‘etotoswa kusukela ebusheni kuqhubeke, ekuphileni kwakhe kwakamuva uyoba ngongabongiyo.’ (IzAga 29:21) Ngakho ukuthi cha, kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuyala. Ukuqeqeshwa okunjalo kuyoyisiza ingane, ngeke kuyilimaze.—Isimiso seBhayibheli: IzAga 19:18.
Qina lapho uthi cha. Ingane yakho ayiyena untanga yakho. Ngakho asikho isidingo sokuba niqophisane uma usuthe cha, njengokungathi ngandlela thile udinga imvume yayo. Yiqiniso, njengoba izingane zikhula kudingeka ‘amandla azo okuqonda aqeqeshelwe ukuhlukanisa kokubili okulungile nokungalungile.’ (Hebheru 5:14) Ngakho akukubi ukubonisana nengane. Noma kunjalo, gwema ukuzithola usuqagulisana nezingane ezincane ngokuthi kungani uthe cha. Ukuqhubeka kwakho uqophisana nengane ngamazwi, kwenza ucha wakho azwakale njengombuzo kunokuba abe yisinqumo.—Isimiso seBhayibheli: Efesu 6:1.
Namathela esinqumweni sakho. Ingane ingase ikuvivinye ukuzimisela kwakho ukunamathela esinqumweni ngokuvele iklabalase noma ikuncenge. Uma lokho kwenzeka ekhaya, yini ongayenza? Incwadi ethi Loving Without Spoiling ithi: “Mshayise ngomoya umntwana. Mtshele ukuthi, ‘Uma uzwa kuthi banga umsindo, kulungile, kodwa mina angifuni ukuwuzwa. Kuzomelwe uye ekamelweni lakho, ukhalele khona uze uqede.’” Kungase kube nzima ekuqaleni ukuthatha lesi sinyathelo esiqinile, nengane ingase ikuthole kunzima ukusamukela. Kodwa cishe izinga lokugoloza kwayo liyoya ngokuya lincipha njengoba ibona ukuthi umile esinqumweni sakho.—Isimiso seBhayibheli: Jakobe 5:12.
Gwema ukuthi cha, ngenjongo nje yokuveza ukuthi nguwe onegunya
Cabangela. Gwema ukuthi cha, ngenjongo nje yokuveza ukuthi nguwe onegunya. Kunalokho, ‘ukucabangela kwakho makwaziwe.’ (Filipi 4:5) Zikhona izikhathi ongayivumela ngazo ingane—inqobo nje uma kungekhona ukuthi uvuma ngoba uphoqwa ukuklabalasa, futhi isicelo sengane yakho sizwakala.—Isimiso seBhayibheli: Kolose 3:21.
^ isig. 10 Ucashunwe encwadini ethi No: Why Kids—of All Ages—Need to Hear It and Ways Parents Can Say It.
“Yishaye indodana yakho lisekhona ithemba.”—IzAga 19:18.
“U-Yebo wenu makasho uYebo, no-Cha wenu, uCha.”—Jakobe 5:12.
UKUBALULEKA KOKUTHI CHA
“Kungokwemvelo kithi ukufuna ukugcina abantwana bethu bejabule futhi bemomotheka. Kodwa uyazi ukuthini? Uma kungenzeki nhlobo ukuba abantwana bethu bathukuthele, bakhungatheke noma badumale, lokho kungasibonisa ukuthi asiwenzi umsebenzi wethu njengabazali. Abantwana bakho bayokwazi kanjani ukubhekana nokukhungatheka nokudumazeka uma bengalitholi ithuba lokukufunda? Abantwana bakho bayokwazi kanjani ukuzikhuza uma ungabafundisi? Kuwumsebenzi wakho ukufundisa lezi zifundo ezibalulekile, ngokuthi cha.”—UDkt. David Walsh.
Thumelela Thumelela Indlela Yokuthi Cha